सिल्टल: बोटनेट संरक्षण युक्तिहरू। कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ?
rootkit सफ्टवेयरको एक टुक्रा हो जुन लुकेको छ र तपाइँको कम्प्युटर बिना मोबाइल वा मोबाइल यन्त्रमा स्थापित छ। यो ठूलो संख्यामा प्रोग्रामहरू र फाइलहरू संक्रमित हुन सक्छ र आक्रमणकारीहरूले स्वचालित रूपमा स्थापित हुन्छ। तिनीहरूले तपाईंको कम्प्युटरको हानिकारकहरूको फाइदा उठाउँछन् र तपाईंलाई अजीब कार्यक्रमहरू र उपकरणहरू डाउनलोड गर्न समझाए।
Artem Abgarian, सेल्टल्ट को एक शीर्ष विशेषज्ञ, मान्दछन् कि rootkits सधैँ खतरनाक छैन तर सबै दुर्भावनापूर्ण गतिविधि लुकाउन सक्छन्, त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई सकेसम्म तिनीहरूलाई छुटकारा पाउनु पर्दछ। कहिलेकाँही आक्रमणकारीहरू तपाईको संवेदनशील जानकारीको पहुँच र रूट किटको सहयोगमा क्रेडिट कार्ड विवरण चोरी गर्छन्। तिनीहरू नियमित रूपमा प्रयोगकर्ताका कार्यहरूको निरीक्षण गर्छन्, विभिन्न खतरनाक कार्यहरू प्रदर्शन र कुनै पनि व्यक्तिद्वारा पत्ता लगाएका कार्यक्रमहरू परिमार्जन गर्नुहोस्।
अर्कोतर्फ, बूटनेटहरू समझौता वा संक्रामित कम्प्युटरहरूको एक विशाल सञ्जाल हुन्। तिनीहरू ठूला र सानो बट नेटवर्कहरू विकास गर्छन् र विभिन्न कार्यहरू प्रदर्शन गर्छन्। बटनेटको सन्दर्भमा, बोटहरू कम्प्यूटर र मोबाइल उपकरणहरू हुन् जुन तिनीहरूका कार्यहरू राम्ररी प्रदर्शन गर्न सक्दैन र ह्याकरहरूले नियन्त्रण गर्दछ। आक्रमणकारीले तपाईंको यन्त्रलाई भाइरस, दुर्भावनापूर्ण कोड वा मालवेयरसँग संक्रमण गरेर नियमित रूपमा नियन्त्रणमा तपाइँको यन्त्रलाई आक्रमण गरेर तपाईंको नियन्त्रण नियन्त्रण गर्दछ। कम्प्यूटर चाँडै botnet सञ्जालको भाग बन्छ र सामान्य रूपमा प्रकार्य गर्दैन। बूटनेटहरू धेरै प्रकारका दुर्भावनापूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, भाइरसहरू र स्प्याम वितरण गर्न र विभिन्न नयाँ उपकरणहरूमाथि आक्रमण गर्न प्रायः प्रयोग गरिन्छ।
rootkits र botnets किन महत्वपूर्ण खतराहरू छन्?
botnets र rootkits सँग प्राथमिक समस्या यो छ कि तिनीहरू लुकेको छ र चुपचाप आफ्नो कार्यहरू प्रदर्शन गर्दछ। यद्यपि botnets सधैं लुकेको छैन, rootkits कहिल्यै तपाइँको कम्प्युटर प्रणालीमा देखाउन सक्दैन।.कहिलेकाहीँ दुवै rootkits र botnets नभएसम्म वातपाईँ नभएसम्म वा तपाईंको यन्त्र पूर्णतया क्षतिग्रस्त नभएसम्म। तिनीहरू चुपचाप आफ्नो कार्यहरू प्रदर्शन गर्छन् र स्वचालित रूपमा तपाईंको उपकरणमा अन्य दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामहरू स्थापना गर्नुहोस्। तिनीहरू पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छन् किनकि, आक्रमणकारीहरूले तपाईको व्यक्तिगत जानकारीलाई परिमार्जन गर्न र पहुँच गर्न बटुनहरू र रूट किटहरू सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छन्। तिनीहरू कम्प्यूटरको एक विशाल दायरामा आक्रमण गर्छन् र यी बोट्सहरूसँग विभिन्न अपराधहरू गर्छन्, तपाईंको कम्प्युटर र मोबाइल यन्त्रहरूमा लुकेको बाँकी। केहि संक्रमित कम्प्यूटर संग, आक्रमणकारीहरूले सजिलै आफ्नो अपराधको दायरा बढाउन सक्छन् र सानो र ठूला आकार दुवैको प्रभावलाई असर गर्न सक्छन्।
हामी आफूलाई रक्षा गर्न के गर्न सक्छौं?
यदि तपाईं विश्वसनीय सुरक्षा अभ्यासहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ यी चरणहरू पालना गर्न सक्नुहुन्छ र संक्रमित वा सम्झौता गरिएका कम्प्युटरहरूको जोखिम घटाउन सक्नुहुन्छ।
1। एंटीवायरस प्रोग्रामहरू राख्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्:
एंटीवायरस प्रोग्रामहरू वा सफ्टवेयर आवश्यक छ, र तपाईंले तिनीहरूलाई सकेसम्म चाँडै स्थापना गर्नुपर्छ। तिनीहरू ज्ञात भाइरस र मालवेयरको बारेमा तपाइँको कम्प्यूटर वा मोबाईल उपकरणलाई पहिचान र सुरक्षा गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईँ सजिलैसँग मालवेयर र भाइरसहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई गम्भीर समस्याहरूको कारणबाट रोक्न सक्नुहुन्छ। आक्रमणकारीहरूलाई लगातार नयाँ भाइरस कोडहरू लेख्दा, परिभाषा र एंटीवायरस कार्यक्रमहरू अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ। तपाईले तपाइँको यन्त्रमा एंटी-रूटकिट र एंटी-बट प्रोग्रामहरू स्थापना गर्नु पर्दछ।
2। फायरवाल स्थापना गर्नुहोस्
तपाईंले फायरवालहरू स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ जसले धेरै प्रकारको संक्रमणहरू रोक्न मद्दत गर्दछ र खराब यातायातलाई रोक्न अघि तपाइँको कम्प्युटरलाई हानि पुर्याउनेछ। यो ट्राफिक सीमित गर्दछ र सबै अपरेटिङ सिस्टमहरूमा यसको कार्यहरू गर्न सक्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईं आफ्नो फायरवाल नियमित आधार मा अद्यतन राख्नुहोस।
3। बलियो पासवर्डहरू प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंले बलियो पासवर्डहरू चयन गर्नुपर्छ ताकि आक्रमणकारीहरूलाई उनीहरूको कुनै पनि मूल्यमा अनुमान लगाउन सक्दैन। पासवर्ड सिर्जना गर्दा विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस् र दुवै नम्बरहरू र वर्णहरू मिलाउनुहोस्। तपाईंले प्राय: इन्टरनेटमा आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्दछ।